पोखरा स्पोटर्स अवार्डलाई खेल संघले सघाउने शनिबार पोखरामा आयोजना गरिएको भेलामा उनीहरुले कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि रचनात्मक सुझाब समेत दिएका छन् ।
बिजेनले जिते मास्टर्स ट्राईयाथलनको उपाधि बोडे, मध्यपुर ठिमीस्थित जयश्री सिद्धि गणेश पौडी पोखरीमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा दोश्रो स्थानमा बिशाल के.सी. र तेश्रो स्थानमा अमग्य श्रेष्ठ रहे ।
ओलम्पिक दिवसमा सुटिङ सुरु प्रतियोगिताको नेपाल ओलम्पिक कमिटीअन्तर्गत स्पोर्ट्स फर अल कमिसनका अध्यक्ष विष्णुगोपाल श्रेष्ठले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरे ।
रुस भ्रमण उपलब्धिमुलक : खेलकुद मन्त्री रुस सरकारको औपचारीक निमन्त्रणामा रुसको भ्रमणमा गएका मन्त्री अथक शुक्रबार बिहान स्वदेश फर्किएका हुन् ।
ओलम्पियनहरुको पुनर्मिलन कार्यक्रम हुने संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलम्पिक दिवस २०२२ को अवसरमा नेपालबाट ओलम्पिक खेलेका खेलाडीहरुको पुनर्मिलन कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाएको छ ।
संघ दर्ताका लागि बागमती प्रदेशको आह्वान परिषद् सदस्य सचिव सुर्यलाल भण्डारीले प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई पत्र लेख्दै खेलकुद सम्बन्धि क्लब तथा संघ दर्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
रग्बी टोलीको बिदाइ, फिटवेल स्पोर्ट्सको जर्सी प्रायोजन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य सचिव टंक लाल घिसिङ लगायत संघका पदाधिकारीले रग्बी टोलीलाई बिदाइ गरे ।
गण्डकीको खेलकुदमा १५ करोड बजेट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
पोखरामा राष्ट्रिय साइक्लिङ प्रतियोगिता हुने साइक्लिङ प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित साइक्लिङ संघ कास्की र साइकल सिटी पोखराको सहआयोजनामा प्रतियोगिता हुन लागेको हो ।
खर्चिलो बन्यो एन्फाको चुनाव अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन कति खर्चिलो बन्दै गएको छ भन्ने देखाउने यो केही उदाहरण मात्र हो ।
कानुनमै नभएको संरचनालाई राखेपको पत्र ! संघीयता मात्र हैन, खेलकुद सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ आएकै दुई वर्ष पुग्न लागिसक्यो तर घरेलु खेलकुदको प्रमुख कार्यकारी निकाय पञ्चायती समयमै छ ।
खेलकुदमा बागमतीको १ अर्ब २२ करोडको बजेट बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
ओलम्पिक डेमा मास्टर्स ट्राईयाथलन हुने ठिमीस्थित बोडेमा आयोजा हुने प्रतियोगितामा १०० मि. पौडी, ३.५ कि.मि. साईक्लिङ र १ कि.मि.दौडको रिले हुने संघका महासचिव युवराज सुनुवारले जनाएका छन् ।
पाँचौं राष्ट्रिय स्केटबोर्ड प्रतियोगिता पोखरामा नेपाल स्केटिङ एन्ड स्केट बोर्डिङ संघको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता असार ६ र ७ गते हुनेछ ।
बालेनलाई पारसले भने, ‘ग्रासरुटमा सहकार्य गरौं’ अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका पारस अहिले एकेडेमी सञ्चालन गरेर साना बालबालिकालाई क्रिकेट प्रशिक्षण दिदै आएका छन् ।
प्रदेश संरचना बनाउन संघलाई राखेपको निर्देशन खेलकुद ऐनले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र कम्तीमा चार प्रदेशमा प्रदेश खेल संघ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छ । कम्तीमा ५ जिल्ला खेल संघ आपसमा मिलेर प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।